Diyopost.com :: निर्मलाकी आमाबुवा भन्छन, ‘छोरीले न्याय नपाए हामीलाई गाली ठोकिदिए हुन्छ' निर्मलाकी आमाबुवा भन्छन, ‘छोरीले न्याय नपाए हामीलाई गाली ठोकिदिए हुन्छ' - Diyopost.com
निर्मलाकी आमाबुवा भन्छन, ‘छोरीले न्याय नपाए हामीलाई गाली ठोकिदिए हुन्छ’
छोरी निर्मलाको हत्या भएको घट्नाबारे सुनाउने क्रममा बुवा यज्ञराज साक्षात्कारमै भावविह्वल भए । छोरीको साइकल भेटिएपछि उसकी साथीकी दिदी बबिता बमले साइकल भेटिएको भए लाश पनि त्यतै होला भनेको प्रसंग सुनाउँदै गर्दा पत्रकार सम्मेलनमै बुवा यज्ञराज रोए ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्दले निर्मला पन्तको वास्तविक हत्यारालाई पत्ता लगाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै आफूहरु न्याय माग्न काठमाडौं आएको बताईन् ।
उनले भनिन्,‘न्याय माग्न काठमाडौं आएका छौं । तर, हामी जहाँ–जहाँ जान्छौं, त्यहाँ–त्यहाँ हाम्रो पछि प्रहरीको सिआईडी छरिएका छन् । प्रहरीहरु त हत्या भएको ठाउँमा जानुपर्ने होईन र ? सरकारले निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलगाउनु दुःखद् हो । राष्ट्रपति यो घट्नामा किन मौन बस्नुभएको छ ? नारीको अस्मितामाथि यत्रो प्रश्न उठ्दा पनि राष्ट्रपति किन मौन बस्नुभएको हो ? एक वर्षमा कञ्चनपुरमा २७ जना चेलीहरुको ईज्जत लुटिएको छ । तर राष्ट्रपतिज्यूले निर्मला पन्तको हत्याबारे किन बुझेरपनि बुझपचाउनुभयो ? तपाईलाई के बाध्यता भयो ?’
वास्तविक हत्यारा सार्वजनिक गर्दा सरकारनै ढल्ने हो भने सरकारलाई यस्तो बाध्यता के हो ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरिन् । छानबिन समितिका ५ जनै सदस्य सरकार पक्षको भएकोले यो समिति निश्पक्ष नभएको उनको आरोप छ । उनले भनिन्,‘समितिमा कम्तीमा एक जना मानव अधिकारकर्मी राख्नुपर्छ । हत्याको अनुशन्धान गर्न गठित आयोगको म्याद १५ दिन किन थपियो ? हामी यसको घोर विरोध गर्दछौं ।’ उनले यसअघि तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेकी छिन् ।
उनले एउटा अपराधी जोगाउनुपर्ने कारण के हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्,‘अपराधी कति बलियो छ ? एउटा व्यक्तिलाई जोगाउन किन यस्तो हुँदैछ?’ उनले प्रधानमन्त्रीले एनटिभीमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा हावादारी कुरा बोलेको पनि आरोप लगाईन् ।
उनले भनिन्,‘मेयरको घरमा निर्मलाको शब लगियो भनेर प्रधानमन्त्रीले हावा कुरा बोल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको भनाईमा कुनै सत्यता छैन । म घोर विरोध गर्दछु।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाले बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएकोले वास्तविक अपराधी पत्ता लगाई दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘निर्मला पन्तको परिवारलाई न्याय दिलाउन रिपोर्टर्स क्लब जस्तोसुकै सहयोग गर्नपनि तयार छ । वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउनको लागि हामी निरन्तर अभियानमै छौं ।’